I-Realme Watch 2, ixabiso lexabiso eliphantsi lokungena kwinqanaba lokunxiba | Iindaba zeGajethi
I-Realme Watch 2, ixabiso lexabiso eliphantsi lokungena kwinqanaba lokunxiba
UMiguel Hernandez | 06/07/2021 13:00 | elektroniki, ngokubanzi, Reviews, SmartWatch
Realme iyaqhubeka nokubheja ekunikezeleni ngexabiso elihlengahlengisiweyo lemali kwizixhobo zayo kwaye ime kwiXiaomi kwindawo ebibonakala ngathi ilawula yodwa. Njengoko imbangi yayo isenza, iRealme ibingena ngakumbi nangakumbi kwiindidi zeemveliso, kwaye iiwotshi bezingazukuhluka.
Sijonga nzulu iRealme Watch 2 entsha, eyona nguqu inexabiso eliphantsi lewotshi yeRealme ukutsala abasebenzisi ukuba banxibe okokuqala. Fumanisa nathi amava esibe nawo ngenkampani yokubukela yaseAsia kwaye ukuba kufanelekile ngexabiso eliphantsi.
Njengesiqhelo, siluphelekisile olu hlalutyo kunye nevidiyo encinci evela kwisitishi sethu se YouTube, kuyo uya kuba nakho ukuxabisa i-unboxing epheleleyo ye Ukubukela kweRealme 2 kunye namanyathelo okuqala kunye nalawo olula. Thatha ithuba lokubhalisa kwisitishi sethu YouTube Kungenxa yokuba ngale ndlela ungasinceda ukuba siqhubeke nokukhula kwaye sikuzisele olona hlalutyo lunyanisekileyo kwiwebhu. Ukuba uyithandile, Ixabiso kwiAmazon liphantsi kakhulu kangangokuba liyakumangalisa.
1 Uyilo: Isacholo esifuna ukubukela ixesha
2 Unxibelelwano kunye neenzwa
3 Isikrini kunye nokuzimela
4 Sebenzisa amava
5 Uluvo lomhleli
6 Inzuzo kunye nexabiso
Uyilo: Isacholo esifuna ukubukela ixesha
Ngokumalunga nokwenziwa, siyothuswa kukukhanya okugqithileyo kwale Realme Watch, yakhiwe ngeplastikhi "emnyama emnyama", uhlobo olunomtsalane okhethekileyo kwimikrwelo. Ngokwembonakalo yiwotshi, enobume bendabuko kunye nobungakanani bento eyi-smartwatch, nangona kunjalo, nje ukuba siyivule siyaqonda ukuba uninzi lwangaphambili luyi-bezel, ndiqikelela ukuba malunga ne-35% ukuba ayingaphezulu, kwaye Kungenxa yepaneli yayo encinci ye-1,4-intshi yemilinganiselo ye I-257.6 x 35.7 x 12.2 millimeters. Njengoko besitshilo, ubunzima buphantsi ngokumangalisayo, ziigram ezili-38 kuphela ezikwenza uzive, isitayile seNed Flanders, ngokungathi awunxibanga kwanto.
Inecala elinye leqhosha elenziwe ngeplastiki eyahlukileyo, indlela eyoneleyo yokusetyenziswa kwesiko kwaye isebenza ukuthoba iminqweno yethu.
Sinesikhundla esinye sokutshaja esinamandla, Ngezikhonkwane ezibini zentsimbi, isebenza ngokufanelekileyo kwaye inobude obaneleyo. Ine-22-millimeter strap eyenziwe nge-silicone enokuvalwa okungaqhelekanga. Umlinganiso wanele kwaye ulondoloze uninzi loonodoli, nangona ukutyeba kwayo kunokukwenza ngempazamo, njengoko kwenzekile kuthi, uyiqinisa ngokunganyanzelekanga. Umtya osendleleni yokusetyenziswa rhoqo Ine "hook" yendalo iphela, ngokomgaqo siya kuba nakho ukubeka phantse le siyifunayo, nangona iRealme iqinisekile ngokusungula imitya eyahlukeneyo kulo lonke ixesha lokuphila kwesixhobo.
Unxibelelwano kunye neenzwa
I-Realme ayenzanga datha kawonke-wonke ngokubhekisele kwiprosesa, i-RAM kunye nokugcinwa kwale Realme Watch. Ngokumalunga neyokugqibela, sicinga ukuba kwanele nje ukuba nemigangatho eyahlukeneyo enokubakho, ubuncinci ithathela ingqalelo ukuba ulawulo lomxholo wemultimedia lilinganiselwe kulawulo olukude lwesixhobo esihambelanayo seselfowuni. Kuko konke oku, kuyasetyenziswa Bluetooth 5.0 ngonxibelelwano olulula nge Ikhonkco leRealme, esilikhumbulayo, liyahambelana zombini i-Android kunye ne-iOS.
Inefayile ye- Accelerometer ezintathu axis ukubala intshukumo kakuhle kunye nokujonga ukusebenza kwethu ngokugqibeleleyo njengoko kunokwenzeka. Ngexesha elifanayo sineklasikhi isivamvo senqanaba lentliziyo kwaye iyancediswa ngu isivamvo sokugcwalisa ioksijini egazini elixhaphake kakhulu kule mihla. Zimbalwa izinto esinokuzikhankanya, asinayo i-WiFi okanye i-GPS, kucacile ukuba siyalibala malunga ne-LTE okanye nayiphi na enye iteknoloji engenazingcingo, kodwa kunjalo, sithetha ngesixhobo ixabiso layo lihlekisayo, Akukho mntu unokukubuza nantoni na eyodlula le unayo kwicandelo lobugcisa. Kufanelekile ukuba ukhankanye ukuba umntakwabo "uPro" uyakwazi i-GPS geopositioning uqobo.
Isikrini kunye nokuzimela
Sifumene iphaneli ye de 1,4 intshi, inika isisombululo esipheleleyo sama-pixels angama-320 x 320, Oko kukuthi, uxinano lweepikseli ezingama-323 nge-intshi nganye. Kuyamangalisa ukuba isisombululo sibe sezantsi kancinci kunaleso sikabhuti "Pro", sibonelela ngokuxinana kwe-pixel ephezulu kakhulu kunenguqulo "ebizayo" yesixhobo. Isikrini sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokukhanya kwepaneli yeLCD, kwiimvavanyo zethu sibonise ngaphezulu ngokwaneleyo Ukusetyenziswa kwangaphandle kwazo zonke iintlobo, ukuzikhusela ngokuchanekileyo zombini xa kubonisa umxholo kwaye xa unxibelelana nawo, uphendula ngokuchanekileyo kunxibelelwano lomzimba.
Ngokubhekisele kwibhetri, sine-315 mAh ezibonelela ngexesha lokufunda ngokutsho kweRealme yeentsuku ezili-12, kuvavanyo lwethu sifike kumhla weshumi ngaphandle kwengxaki, Nangona amanqanaba athenjiswe luphawu engafikelelwanga, ihlala isondele kakhulu, iya kuxhomekeka kusetyenziso olwenziwe sisixhobo ngumsebenzisi ngamnye. Umrhumo opheleleyo uya kusithatha kancinci ngaphezulu kweyure.
Sifumene isixhobo esinemisebenzi esisiseko ephawulwe kakuhle, nokuba une-smartwatch esihambele phambili uyazi ukuba i-90% yento oyisebenzisayo ikule nto Realme Bukela 2, nangona amava, ewe, ngokucacileyo enexabiso eliphantsi. Sinenkqubo yokuqikelela imozulu, ngaphezulu kwe-90 yeendidi zoqeqesho ezahlukeneyo kunye nemilinganiselo esisiseko yokujonga ezemidlalo rhoqo, konke oku kubonisiwe kwi Ikhonkco leRealme, Isicelo esibonelela ngesishwankathelo kunye nokujonga okulinganiselweyo, kodwa oko kuyasivumela ukuba sitshintshe amanqanaba ngokukhawuleza.
Uqikelelo lwemozulu (alukaguqulelwa ngokuchanekileyo kwiSpanish)
Izikhumbuzo zokuhambisa amanzi
Fumana imo yefowuni
Ikhamera yokulawula kude
Imihla ngemihla yeNjongo yokuGqitywa kwesikhumbuzo
Isixhobo sinokumelana kwamanzi kwe-IP68, Nangona ayenzelwanga ukuba udade nayo, iya kuba iyamelana ne-splashes esisiseko, ke iya kumelana noqeqesho lwethu ngaphandle kwengxaki.
Sinayo, njengoko besesitshilo ngaphambili, isongo esifuna ukubukela. Isikrini sinokuyilwa kwesikwere ngokuthe kratya kunesiqhelo, kodwa imisebenzi ayihambi ngaphezulu kwento enikezelwa lelinye ixabiso, iXiaomi Mi Band 6. Ukuba ufuna isixhobo esineewesthetics zokubukela kunye nemisebenzi esisiseko, Kwii-euro ezingama-50 ezibizayo, zimbalwa ezinye iindlela ezinje ngeRealme Watch 2.
Inqanaba leenkwenkwezi ezi-3.5
Ithunyelwe nge: 6 de julio de 2021
Utshintsho lokugqibela: 5 de julio de 2021
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » SmartWatch » I-Realme Watch 2, ixabiso lexabiso eliphantsi lokungena kwinqanaba lokunxiba
I-Huawei WiFi AX3, umzila kufuneka uphucule unxibelelwano lwakho
Ukuhamba uzolile kweli hlobo ngeemoto ngale dashcam / ngasemva kwesipili